Ny Galaxy Note 9 dia ho tonga miaraka amin'ny Exynos 9810 araka ny Geekbench | Androidsis
Ny Galaxy Note 9 dia ho tonga miaraka amin'ny Exynos 9810 araka ny Geekbench
Andro vitsy lasa izay, nampahafantatra anao izahay ny amin'ny fahafahan'ny Samsung manolotra amin'ny fomba ofisialy ny Note 9 mialoha ny fandaharam-potoana. Raha tokony hanao azy alohan'ny faran'ny volana aogositra dia ho nataoko iray volana talohan'izay, tamin'ny fialantsasatra feno. Saingy, azo inoana koa fa ireo tsaho ireo tsy manana fototra, toy ny mitranga isan-taona miaraka amin'ny tsaho momba ny naoty.
Ny antony lehibe hanafainganana ny fanombohana ny Note 9 dia ilay orinasa mikasa ny handefa ny smartphone voalohany faran'izay haingana miaraka amin'ny efijery aforitra, araka ny nambaran'ny talen'ny tompon'andraikitra amin'ny vondrona mpanao gazety vitsivitsy ao anatin'ny rafitry ny MWC natao tany Barcelona tamin'ny faran'ny volana feb.
Amin'izao fotoana izao, prototype an'ity terminal ity, ny Galaxy Note 9, efa dia nandalo fitsapana fampisehoana Geekbench, ka manamafy fa ao anatiny dia ho hitantsika ny Exynos 9810, ilay mpikirakira izay hitantsika ao amin'ny Galaxy S9 sy Galaxy S9 +. Araka ny hitantsika, ny fampisehoana natolotry ny Note 9 dia mitovy amin'ny hita amin'ny Galaxy S9 +, satria ny terminal roa dia tantanan'ny 6 GB RAM. Ny kinova an'ny Note 9 dia hamely ny tsena amin'ny Android 8.1
Vokatra Geekbench asehoy anay ny valiny tsara kokoa noho ny kinova miaraka amin'ny mpikirakira Snapdragon, zavatra iray izay tsy tokony hahagaga antsika satria ny Samsung dia mampiasa tsara kokoa ny fiasan'ny fitaovany miaraka amin'ny processeur izay amboarin'ilay orinasa, na dia tsy dia tsikaritra loatra aza ny fahasamihafana, indrindra ho an'ireo mpampiasa izay tsy miraharaha an'io lafiny io.
Ny tena tianay ho fantatra dia ny fahombiazan'ny Note 9 miaraka amin'ny Android P. Amin'izao fotoana izao, Samsung dia mbola tsy nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny fananganana ny Project Treble, hahafahan'ny mpamokatra Koreana mifantoha amin'ny fampanjariana ny sosona anao manokana fotsiny, avelao ny fampifanarahana amin'ny processeur, izay tompon'andraikitra mivantana amin'ny Qualcomm, ao amin'ny faritra Snapdragon, taorian'ny fifanarahana natao tamin'i Google.
Ny antony mahatonga ny fahatarana dia mety noho ny tsy fahazavan'i Samsung momba azy io, na tsy maika raha ny famoahana ny fanavaozana azy, satria ity tetikasa ity dia avy amin'ny perla ho an'ny modely miaraka amin'i Snapdragon tsy miaraka amin'ireo maodely tantanan'ny Exynos.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy Note 9 dia ho tonga miaraka amin'ny Exynos 9810 araka ny Geekbench